अराजक शब्दहरु: 11/02/18
परिवर्तन र संस्कार - मनीष झा
गएको सात दशकमा मुलुकमा सात वटा संविधान बने र ६ पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, यो प्रक्रियाको उद्देश्य परिवर्तन थियो ।
विद्यमान परिस्थितिबाट असन्तुष्ट भएपछि हामीले धेरै पटक पद्धति र प्रक्रिया परिवर्तन त गर्‍यौ, आफ्नै संस्कार परिवर्तन गर्ने प्रयास भने गरेनौं ।
अपरिहार्य राजस्व सेवा - डा. शान्तराज सुवेदी
यसबीचमा, परराष्ट्र समूहलाई छुट्टै सेवा बनाई अझ् विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विकास गरिएको छ । तर, राजस्व प्रशासन विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास हुनसकेको छैन । विभिन्न कार्यदल र विज्ञ समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको आधारमा समेत स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण वा अर्धस्वायत्त राजस्व बोर्ड मार्फत राजस्व प्रशासन संचालन गर्न दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपालको राजस्व प्रशासनलाई छुट्टै व्यावसायिक र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्न विभिन्न अध्ययन गरिएका छन् । वेदानन्द झ आयोगको २०२६ सालको मध्यावधि प्रतिवेदनमा प्रशासन सेवा अन्तर्गत छुट्टै राजस्व समूह गठन गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यसैगरी, २०३८ सालमा डा. यादवप्रसाद पन्तको अध्यक्षतामा गठित आर्थिक आयोगले पनि राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन राजस्व समूह गठन गर्न सुझएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिंदै आएको छ । यसका साथै, कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल २०५२, राजस्व प्रशासन संगठनात्मक संरचना सुधार सुझव कार्यदल २०६३ र राजस्व परामर्श समितिले समेत राजस्व बोर्ड गठन गर्न पटक–पटक सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि गरिएका अध्ययन तथा विज्ञ कार्यदलहरूले छुट्टै राजस्व सेवा वा बोर्डको खाँचो औंल्याउनुले यसतर्फ नीतिगत निर्णय लिन बल दिएको छ । तर, विज्ञ कार्यदल, विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं राजस्व प्रशासनका अनुभवीहरूले दिएको सुझावलाई उपेक्षा गरेर स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि प्रशासन संयन्त्रभित्र कायम छ । अमूक व्यक्तिले गर्न सक्ने काम मैले किन नसक्ने ? राजस्व प्रशासनमा निश्चित कर्मचारीहरू मात्र किन ? जस्ता गलत र विकृत सोचाइका कारण राजस्व समूहलाई विशेषज्ञ सेवा बन्न रोकिरहेको छ ।
राजस्व समूहमा प्रवेश गर्न खास विषयहरू अध्ययन गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता फेरेर अहिले जुनसुकै विषयको शैक्षिक उपाधि हासिल गरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले राजस्व प्रशासन कमजोर र अव्यावसायिक बन्दै गएको छ । तर, नीतिनिर्माताहरूले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएका छैनन् । विज्ञहरूको आधारयुक्त सुझावका बाबजूद संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा छुट्टै राजस्व सेवा प्रस्ताव नगर्नु तर विशेषज्ञ सेवाको रूपमा रहेका प्राविधिक प्रकृतिका शिक्षा तथा विविध सेवालाई समेत प्रशासन सेवामा समाहित गर्न चाहनुले निजामती सेवामा भद्रगोल र अव्यावसायिकता निम्त्याउन खोजिएको देखिन्छ ।